Nei ini Nemba Naizvozvo Young? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Nezuro ndakaita kunonoka usiku vanorega pachitoro kubata zvinhu zvishoma uye ndaiva kunakidza chaizvo kukurukura pamwe keshiya. Takaita hurukuro diki sezvo iye tarisa vangu zvinhu, uye ipapo iye kundipa dhisikaundi kadhi asi Ndakamuudza mudzimai wangu akanga atova munhu. Ndipo apo nhaurirano paakasvika mafaro. Ndinoziva nhaurirano iyi anonyatsoziva nokuti wandakamboda kakawanda asati. Zvazvinoita chinhu chakadai ...
munhu: chii!? Uri kuroorwa?
ini: Hongu Ndave ndakaroorwa maviri nehafu zvinoshamisa makore.
munhu: Une makore mangani? Iwe tarisa sezvinoita mwana.
ini: Ndiri makumi matatu.
munhu: Muri saka muduku! Nei munyika waizoita kuti?
ini: Sei wakaramba I?
mu 2009, Ndakaroorana panguva padikidiki pamutemo uye ndaisambogona vanoremekedzwa zera makore makumi maviri nerimwe chete. Panguva yokudanana wangu, kupana nduma, uye pfupi muchato, Ndanga akabvunza nguva nenguva zvakare mibvunzo yakaita, "Sei kuzoroorwa muduku? Chii nhokwe?”, uye munhu kufarira kwangu, "Unofanira kunge vakamirira uye vakanakidzwa hwako!”
Vamwe vabereki kubvunza mibvunzo iyi vaiva vatorwa, asi vamwe vaiva mhuri. Kwaiva Ini sebenzi kuzoroorwa panguva yakadai "muduku” zera?
Well ndikupe zvikonzero zvitatu Ndakasarudza kuzoroorwa pandakadaro.
1. Ndakasangana mukadzi aitya Mwari
Somushandi eighteen makore freshman muBhaibheri kukoreji, Handina uchitsvaga mukadzi, asi Mwari akaona zvakakodzera kuti ini yokusuma mumwe mukadzi wechiduku pashure mwoyo wake. Akanga akanaka, asi zvakakosha aida Jesu. Iye aiziva kuti akanga ari mutadzi anoshayiwa kwenyasha dzaMwari, uye iye akanga ari anozvininipisa, anodzidzisika mwoyo. Takapedzisira ari chikamu kereke chete, saka ndinofanira kutarisa kwaari kushumira, kura, uye nokutendeka kupa nguva yake vamwe. Ndakatanga kutaura kwangu rwomukati denderedzwa pamusoro wake. shamwari dzangu, zvevapi vamazano, uye vafudzi vose vakabvumirana – iye waiva mukadzi aitya Mwari. Ndaigona kuona pachangu achifamba naye uye rudo naye kwoupenyu hwangu upenyu.
2. Ndakanga ndagadzirira
Panguva ino ndakatanga kufunga chokwadi muchato uye zvinorehwa vaite pachako kuti munhu kwoupenyu hwose. Ndakazvibvunza kana kwete ndakanga akura uye basa zvakakwana. Ini akaongorora Magwaro uye nezvazvo mabasa murume, uye vakataura vakaroorana shamwari uye zvevapi vamazano. Mushure mijenya nomunyengetero uye kukurukura, zvevapi vamazano angu uye vafundisi kuchechi kwangu vakandiudza vaifunga ndagadzirira tivavarire naye. Ndakanga kuzara. Asi ndingadai ndisina vakatevera naye kana ndakafunga ndakanga ndisina kugadzirira kutungamirira pakunamata kwake, kumupawo, uye kuti ave musoro wemhuri.
3. Kuroorana chikomborero
Pakutanga ndakanzwa sokuti ndaifanira kuratidza kuti naysayers kuti kuroorwa muduku ndiye OK dzimwe nguva. Asi kana Ndakatarisa muMagwaro handina kuwana zvinhu sezvinoita, "Marriage akaenzana rufu! Kuitiza!” kana, "Isa muchato kubvisa kusvikira haugoni kuripfekenura machiri,” kana, "Asi kuroorwa kana uri ndachembera kunakidzwa noupenyu,” kana, "Kutamba munda kwekanguva vobva sarudza zvakanakisisa chete.”
Panzvimbo Ndakawana mirayiro akafanana, "Tizirai ruchiva kweuduku”, uye ini kuverenga ndima kufanana Zvirevo 18:22 kuti anodaro, "Uyo anowana mudzimai anowana chinhu chakanaka, uye anowana nyasha kubva kuna Jehovha.”
Saka kana vanhu vanoti, "Chii vanayo iwe kuzoroorwa muduku?” yangu Mhinduro itsva, "Uri kubvunza mubvunzo zvakaipa.” Ndinofunga pamidzi iwoyo ndiwo okuti muchato akakubira chinhu kubva kwandiri, sokunge pauduku hwangu huri zvaparadzwa murudo vakaita sezvibayiro kana zvaigona kushandiswa musingadanani mafaro uye flakiness.
Kuroorana chakanaka chinobva kuna Mwari! Inzira yenyasha. Ndakawana mukadzi, uye kuti chinhu chakanaka. Handibvumirani pamwe pfungwa runoti, bvisa zvikomborero zvaMwari yakapfuma chero uchigona. Panzvimbo Ndaiti kunakidzwa zvipo zvaMwari zvakanaka uye mutariri navo kubwinya kwake.
Izvi hazvirevi kuti munhu wose anofanira kuroora kana ndakazviita. Zvingadai vaenda zvakaipa kana ndingadai vakaedza kuroorwa ndisati ndagadzirira. Vamwe vedu vachifanira kukura zvakawanda, uye nevamwe vedu tinofanira kunyengeterera agutsikane uye kuvimba naJehovha uye nguva yake. Chinangwa changu hazvirevi kuti vaduku iwe kuzoroorwa, zvikuru mutsvene muri. Ndinoda kubvisa nhema kuti isu zvikanonoka akura uye chete funga muchato kamwe tiri matatu kana vakura.
usiku Last on Twitter munhu akandibvunza kana Ndinozvidemba kuroorwa saka muduku. mhinduro yangu? Ngazvisadaro.
Ndicho chimwe zvisarudzo zvakanakisisa I ndamboita. Ndiri kufara uye mutsvene kupfuura Ndaiva nemakore maviri nehafu kare, uye kuti chinhu chakanaka. Handidi kuti sokuti ndiri vamwe nakisa isingawanzowanikwi anomaly. Ndinoziva zvakawanda vabereki vakanga akaroorwa sezvinoita muduku kana muduku kupfuura ini. Ivowo vakaona muchato sechipo uye ndamboona zvibereko chipo ichocho. Me uye mudzimai wangu ave vaduku zvino, asi ndiri kunamatira nyasha kuda mudzimai wangu zvakanaka kusvikira pakuguma kweupenyu hwedu. Kusvikira zvino ndinoda kuteerera uchenjeri Zvirevo uye "Ufarire mukadzi hwangu.”
Jannon Fitzpatrick • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:58 ndiri • pindura
Ini noruremekedzo havabvumirani Kevin Ferere. Haugoni kuziva chii rudo kusvikira munoziva Mwari ndiani, nekuti Mwari ndiye Love! The Bible haritauri chinhu pamusoro nomumwe kumativi kana kuwadzana nevamwe kuwana kuti mumwe. Saizvozvo, Isaka layed pamusoro musi Rebecca uye aiziva kuti akanga ari mumwe kwaari. Haana musi kumativi kana kutaura Leah kuti saka kana aiva nani saka vaizoziva kana Rakeri akanga chaizvo zvaaida kana kwete.
Achitaura nedzangu ruzivo, Ndakaita zuva vamwe uye kuwana chii rudo haana. Kwete chete kubva ukama hwangu, asi vabereki vangu’ nehanzvadzi’ ukama. Dambudziko raiva, havana ukama kwakavakirwa paShoko kana rwaMwari uye ndokusaka havana kushanda kunze. Ndakaita tiwane Man Godly, saka rinogona kushanda nenzira zvaunotaura, ASI ndinotenda nomwoyo wose kuti kana ndingadai ndamirira uye kurindwa mwoyo wangu kubva kune dzimwe ukama zvakanga zvisina kururama kuti ini, Ndingadai kunge ari nani uye zvishoma akaputsika nzvimbo, kuti recieved murume wangu kubva pamaonero mukadzi hwaMwari pane akatyoka mukadzi maonero pamwe mukwende kushanda kuburikidza.
No kusaremekedza aida, asi ndinotenda kuti ndizvo zvikurukuru chakaipa gumbeze okuti anogona here kwokunangisa vaduku mwoyo nenzira isiri. (Google ruzivo nezvokudanana Godly Vs. Modern Dating. Pane zvimwe zvinhu here zvakanaka imomo.)
Deborahfatuade • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:59 ndiri • pindura
KevinFerere • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 6:59 ndiri • pindura
Nemiwo vachindinzvera zvakanaka. The Bible angati chero kwainoda, asi muri zvinotiwira zvose zvaunazvo kuenda kubva. Uye uyo modaidza Mwari anobva mugumo zvauri kudzidziswa uye dzenyu nazvo. Pakupedzisira, zvaunotenda zviri sarudzo, asi chii munoziva rinorambidzwa pamusoro ne chokwadi.
uye into, mashoko anogona kuva zvishoma mukuru, asi kunofanira kubatwa tsanga munyu, sezvo chinhu.
Lokelani70 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:00 ndiri • pindura
Neniwo noruremekedzo havabvumirani Kevin Ferere.
Chinhu bedzi yave vakaratidza kuti makaita sarudzo hana haana kurarama upenyu hwako kuti Mwari kuburikidza neshoko rake, bhaibheri. nepo, takaita chisarudzo kurarama upenyu hwedu Godly muchato, kuburikidza neshoko raMwari. Chokwadi chenyaya ndechekuti, umwe asina kunzwisisa Blog ichi zvakakwana kana Mwari haasi kuisa pokutanga muupenyu.
Kunyengeterera michato ALL! Mwari komborera!
KevinFerere • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:00 ndiri • pindura
Chandakaita sarudzo vanoziva kuwana Mwari kuzviriritira kwete neni chii munhu akadzidzisa. Usanetseke, Ndaimbova kungofanana nemi.
AC • Gumiguru 3, 2013 pa 5:53 pm •
Ndinoda chete ndinoda kutaura, haugoni kuwana Mwari. Bhaibheri akati tiri akafa. vanhu vakafa vanogona kuita chinhu. Mwari akawana isu.
Oh… Ndine urombo Kevin, unofanira vakavhiringidzika. Ndinoshumira Mwari haasi Mwari nokuzvidzora vaitsvaka. Vanetseke hakusi kuda kwaMwari, asi eachother rudo zvakawanda anotida ndiye! Kufanana Ndakanyora kare, kuisa Mwari pakutanga ndizvo zvinodiwa KWAKAITA kunzwisisa Blog ichi, sezvo Mhinduro yako kunoratidza pfungwa dzangu. Dai zvose zvatinotaura uye kuita kuti tifadze Mwari. Mwari Ropafadzai uye iwe manheru zvinoshamisa.
Fru-Mukete Arnold • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:00 ndiri • pindura
Hahaha, tichitsvaka, muchawana Him- yeuka zvakasikwa zvinoratidza Naiyewo. Saizvozvo, I LL ndikupei minimini, chete kunhonga Bhaibheri uye kuenda wochikandira sezvinoita bhuku nyaya kucherechedza zvose zvinotaurwa zvinoita uye kunyange nomusoro wavo akabva, tarisa vamwe mabhuku uye enzanisa zvinotaurwa. Asi mubvunzo uchada mumwe kutsanangura imi somethings, usarega sezvo uri kutsvaka chokwadi.
Kana uchitenda muna Mwari sezvo zvakawanda zvaunotaura zvaunoita, munodireiko kudiwa vaburitse zvikuru? Handina kuna Mwari, nekuti Ari mandiri. Ndini Iye uye Ndiye ini. Asi ndine urombo, unogona kunzwisisa kuti unogonawo?
Delinabini • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:01 ndiri • pindura
Ini havabvumirani sei Ungava Mwari uye Mwari anogona sei kuva imi hamuna chaizvoizvo kusika pachako kana maiva Mwari?
KevinFerere • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:01 ndiri • pindura
Ndine urombo, typo: *Handifaniri kuratidza Mwari. *
Asi mashoko zvinoreva zvarinotaura. Pasinei mukati menyu, kuti ndizvo zvauri. Usatya kugamuchira chokwadi kuti nokuti uri akadzidzisa kuti zvakaipa.
Addis Hunter • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:01 ndiri • pindura
100 % newe! Iniwo vakasangana murume wangu pa 20 uye kwapera gore takaroorana. Ndaifanira kuva zvakafanana kukurukurirana anongoitika vatorwa, mhuri neshamwari uye ndinoda kukukurudzira kuti urambe wakatendeka kuna Jehovha uye mudzimai wako akanaka munzira ose discribed mushoko. Ini nemurume wangu tiri ikozvino 30 makore apo ndinoti vanhu dzandakamboenda “Zvinofadza” akaroorwa kwerinenge 10 Makore ivo femo!!! “kwazvo”?? Kuita zvakafanana vanzika nevamwe “kutambisa youth yedu” nezvimwewo nezvimwewo. Asi MWARI anga saka ngoni uye zvakanaka kwatiri kuti ini pum nemashoko sei vakakomborerwa ndiri kuti vakasangana nomurume wangu pandakadaro. Tinoda reminising yedu kukoreji makore pamwe, uye kurota pamusoro zvinhu zvose zvikuru kuti upenyu hune kwatiri mberi! Tine 2 vasikana akanaka uye mwana mukomana munzira (kuti isu takanyengetera achizvininipisa kuti gore rino uye Mwari akapa) , (atually Ndiri yakafanira nhasi ;-))..uye isu couldnt kuva NECHOKWADI zvikuru kuti Chaiva DeVine pamwe naMwari kwatiri kuunza pamwe chete.
zvinotarisirwa, tiri NOT akakwana (kunyange shamwari dzangu vanofunga kudaro nokuti isu dont kutarisana zvinozivikanwa enyika kusatendeka, Kusaremekedza uye kugara nharo), asi hatina kuwirirana, Zvinyamusi, dificulties zvemari nezvimwewo, musiyano ndechokuti isu Vimba naMwari rokutungamirira nhanho dzedu, tinoremekedza mumwe uye edza zvatinogona havazombokundikani KUTENDA, kutaurirana, uye kutsvaka kutungamirirwa kubva mutsvene sezvo vaviri uye individually..My murume ndiyo rakasiyana munhu zvandakaita akasangana uye isu tose kunzwisisa kuti chinoita kuti vafare mumba haisi kuita kana kutenga “zvinhu” kuti eachother afare asi Kuziva ani tiri muna Kristu, anotevera mirayiro yake nezvokuroorana uye tichidanana mirawo, zvisinei zvaunokanganisa dzedu kana sei tingatova “vanonzwa” panguva iyoyo , tichiziva kuti MUFARO kucharamba kwekanguva pfungwa kuti anoenda kure, asi MUFARO kwechokwadi kunobva Ishe chete.
Ndinoshuva iwe nemukadzi wako makore akawanda Blessed MUFARO!!!
I Love mimhanzi yako zvakare nenzira ;)..
Josh • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:01 ndiri • pindura
Uri muenzaniso mukuru kuvaKristu vechiduku vanoda kukudza Mwari nenzira avanoita madzimai! Ndatenda! Ini chete kuroorana, ndiri 22, uye kutarisira kushumira Ishe muwanano kwemakore anouya!
Johnny_renteria • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
Zvitende kana kwete asi ndakaroorana pazera 18. Ndaiva ndisina nzira vagadzirira kuva murume ari mari mupfungwa uye ini atova baba. Asi Ndainge akapa upenyu hwangu kuna Kristu uye ndaiziva kuti vakadzi ndaiva aizova munhu akure neni. Vanhu vanondibvunza chete zvinhu uyewo. Ndinoona ndakasuruvara kunyange kuti muchato kunoonekwa sechinhu chinhu chakaipa. nhasi, Ini kufunga pamusoro kuti ini vakasvika pakugumisa kuti vanhu vave saka udyire kuti mufungo achitora basa mumwe munhu anenge hazviiti. Marriage haasi pamusoro apo uye nei iwe taroorana asi pamusoro uyo akavakirwa kuti muchato. Uye inofanira kuva Kristu…
Deborah • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
Ndinofunga nepfambi? r trip..i zvakanaka vane frnd uyo akaroora @ 19 (Ivo hv akaroora 4 6 yrs NW)N lkng @ wake zvino tinoona kunze kugamuchira Kristu muupenyu hwake dat iri d chisarudzo chakanakisisa iye ati akaita….kunyange ndinofanira kubvuma ndiri asina kugadzirira 2 kuwana married..it Anovhundutsira ini Kosi handidi 2 anofanira muropa 2 D zvakaipa munhu 4 D kwoupenyu hwangu asi ndinoziva Jesu haazomboshandisi nditenderei kuti D isiri sarudzo…neniwo dzimwe nguva vanonetseka and kuzoroorwa Pandinosvika zvose Ini kuda kubva Jesu N anogona kumbobvira brk hrt yangu?….Ur chisarudzo chakanaka N Ini gv nepfambi thumb 4 izvo!:)
MNM103 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
Izvi chaizvoizvo rakandidzidzisa zvizhinji. Uye zvakanga kukuru kunzwa kwako mukadzi rutivi izvozvowo!
Lance Peterson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
Zvikuru. mwanakomana wangu zvakare kuroora 2 1/2 Makore apfuura kumukadzi nokuzvipira inoshamisa uye vakanga zvose akwegura pakati 19. nyaya yenyu ini akavayeuchidza vavo.
Brandon Clements • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
Ndinoda Trip ichi! Ndakaroorana pa 22 uye ndinoda chaizvo muchato wangu. Zviri shamisa nokuti ndiine yakafanana kukurukura gasi chiteshi mushandi pamusoro mwedzi kare. Iye akakoromora rose, “Sei kuroorwa kana unogona kuva mukaka pachena?” mubvunzo wangu mwoyo akaputsa kwaari. Ipapo ndikapfuurira kumuudza kuti mudzimai wangu akanga asiri mhou–kuti akanga anotyisa uye ndinomuda.
Sonaaha • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
loool uri shamisa = D
Louib2001 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:02 ndiri • pindura
Anna • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:03 ndiri • pindura
Izvi chaizvo akataura neni. ndiri 21 muukama uye handikwanisi kukutaurira kangani Ndakaziviswa kuti ndiri “muduku kuti kufunga kunyura”, Ndinofanira kumirira kuti “mhenyu upenyu chokutanga”, kupedza chikoro uye kumisa basa ndisati kupinda kudanana / muchato. Une zvinoshamisa uye zvinotyisa uchapupu. Ndinoshuva iwe nemukadzi wako kwoupenyu hwose makomborero uye mufaro pamwe chete!
kusazivikanwa • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:03 ndiri • pindura
ndiri 20 uye hatina kumbova noukama saka handidi kuwanikwa ne 21 asi ini ndakauraya vanoremekedza pfungwa dzenyu. Ndinogara ndine Mindset “kune mumwe wake”. Ndinofunga iwe nemukadzi wako achava zvachose kuenda kure uye ndinodada pamusoro matanho kuti iwe wakatora risati muchato. Zvinoita sokuti mose akatora committment kukoshesa chaizvo, iyo I uchira.
Tony Doyley • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:03 ndiri • pindura
Very akaropafadzwa kuverenga Blog renyu nezvokuroorana vachiri vaduku. Mudzimai wangu akaroora pa 18 uye isu tave akaroora 10 makore ikozvino. Sure takava vamwe nemateru nezvisingafadzi, asi ndinotenda Mwari akatungamirira isu zvishoma nezvishoma kwemakore ose aya uye ikozvino tiri nesimba nokusingaperi. Ndinokutendai nokuti uchapupu hwako zvinoshamisa.
KLE Photography • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:03 ndiri • pindura
Congrats pamusoro muchato wako muduku! murume wangu ndakaenda kuburikidza chete chinhu patakaroorana 8 Makore apfuura panguva 20 zera! Saka tinoziva chaizvo zvauri kuenda kuburikidza! Vanhu vaifunga takaroorana nokuti ndakanga pamuviri (Handina) kana nekuti akanga ane zvisiri pamutemo mutorwa (iye ane American mugari). Hatina zvakawanda dzeshamwari dzedu mukona yedu sezvo vakanga kuita chete chinhu. Asi ikozvino nenguva 28 vari kuuya kumativi uye kuedza “batana.” Ndiri kufara Mwari akandikomborera nemurume wangu pasinei nezera rangu. Mwari akuropafadzei mose!
BTW Tiri kurarama munzvimbo DMV! (MD) pamwe isu tose tinogona kusangana kana kuenda kuchechi pamwe chete! Tichiri havana kuroorwa shamwari elnaz.
KevinFerere • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:03 ndiri • pindura
Handifungi chinhu ari chakabiwa kubva kwamuri, zviri zvauri kurega. Zviri inotonhorera kuti mamiriro muBhaibheri, asi zviri kwauri kuti zvitungamirire upenyu hwako, kwete bhuku; pasinei nhungamiro rinopa.
Ndicho zvinorumbidzwa pakuzvipira uye muduku, asi chikamu kuti “kweuduku ruchiva” ndiye kudzidza uye kukura iwe kubva misangano uye mumagariro kuita vakadzi siyana. Kudzidza chii chaunoda uye regai kuita, ona, uye kunzwa; pachinzvimbo Kukura kwako saka chete chete munhu mumwe.
Haugoni kunyatsoshamwaridzana kutaura here kuti ndimi ani uye yezvauri kuda, kana kunyange zvinongoratidza kuda, kana iwe usina aikurukura asi zvikuru nevamwe vakadzi kuti kuratidza kuti kwauri. Hamuzivi chii Rudo kana hauzivi chii hazvisi.
muenzi • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:03 ndiri • pindura
Haufaniri kuziva chii Rudo harusi kana uchiziva kuti Rudo. Sei kuti unoziva kana mumwe kunokupa nyepera $100 bhiri kana munoziva chairo $100 bhiri somunhu. Pane chete chaiye $100 bhiri, chete kudzidza kuti uye unogona kuudza kana mumwe kunokupa nyepera. The chete norudo. Kune ndevokunyepedzera zhinji ikoko, asi kana uchiziva chii chairo iri, ipapo iwe uchagona kusvibisa nyika nyepera. Sezvo Mwari ari rudo, chinhu vasingadi Mwari haagoni kuva rudo.
KevinFerere • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:04 ndiri • pindura
Nokudaro unofanira kudanana kumativi uye kusangana uye pabonde nevamwe vanhu. My nguva chaizvo. Chii isingadi Mwari kuzviitira. Unogona kuedza kuva kwemutemo nezvazvo nokuti hunhu hwedu kuita kudaro, zvisinei, tinofanira kurega neururami izvi ari kuti pane zvakawanda pfumbu nzvimbo pakati chechinyorwa.
Angeldoll1 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:04 ndiri • pindura
I havabvumirani nemashoko ako kurara nevamwe vanhu- STD raMwari, AIDS uye pamuviri pasingadiwi, Migumisiro ukama hwakadaro. Kana munhu anovadzinga ukama hwakadaro, havana kudzidza pamusoro zvakakodzera kuzvipira uye zvakadzama zvomudzimu zvinhu rudo pane ruchiva. Uyewo ini havabvumirani dzenyu maonero pamusoro kudanana kumativi pamberi uchida kuita nokuti “kudanana kumativi” hachisi chinhu chinodiwa kuziva nomukwanyina kubva nonspouse. Kuzvipira zvava kupera nokupindana / kufambidzana yakaitwa vanhu vanotaurwa muBhaibheri nepo kuva mutiple vadyidzani, ndine kurongwa pabonde ndiwo unhu mhuka.
AJ • Gumiguru 3, 2013 pa 3:46 pm •
Angeldoll1it ndicho runako ungwaru venyu kufunga kuti vose vasiri kwevakaroorana pabonde hazvo kunounza “STD raMwari, AIDS uye pamuviri pasingadiwi”… asi chokwadi, iwe vaisazoziva kuti kana usina kutorwa nguva kuti musoro wako kubva huruva bhuku rako akwegura uye vawane upenyu ruzivo.
Iwe kuzvitarisa isakarurama. Kana wakura uye akachenjera zvakakwana iwe ndichaenda nezvazvo nenzira yakarurama. Paunonyanya kudzivisa chinhu, ari pedyo wasvika kwariri. Nanganai positives uye ndizvo uchafarirwa.. Asi chokwadi chitendero chako haridzidzisi kuti.
Josh • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:04 ndiri • pindura
“Hakuna une rudo rukuru kune urwu, kuti munhu ape upenyu hwake nokuda kweshamwari dzake.” (John 15:13) Munoziva kuti rudo kana uchiziva Kristu.
Please changamire, kana uri kuenda regurgitate rugwaro, mudukusa unogona kuita kushandisa pachako kufunga kwenyu kwairi. Hazvina Munongedzo, kwete kutaura gwaro.
iye • Gumiguru 3, 2013 pa 12:25 pm • pindura
zvinokubatai yako rugwaro kwakaipa uye nzira unofunga uri projecting pachako somuKristu asingatendi kutevera Bhaibheri asi “magwaro” asi anosarudza kurarama yako remitemo uye mapiki uye anosarudza chii, kana chinhu kutevera kuti Mwari ari pamusoro….
Vazhinji zvauri aiti kumira enhema dzidziso.
Gabe Taviano • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:04 ndiri • pindura
Nice kukuonai Blogging pano Trip! Thanks kunyengetera kwandiri vhiki rino, Mwari chokwadi kwave zvakanaka.
The kupenga chinhu pamusoro penyu kuroorwa zvokuti vechiduku ndechokuti nzeve dzenyu uye maziso akasvinura kuna Mwari zvakawanda wako mashoma makore pane vamwe kuti vakaatsinzina naye kure ichatoguma. Munoziva kuti Mwari ndiye chikamu muchato wako sezvo zvikuru sezvo vaviri muri, uye izvozvo huru. Thanks chokuita!
Madeleine Farrell • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:04 ndiri • pindura
Uyu yakanaka kufunga kwacho. Ndakaroorana pa 17 uye murume wangu akanga 19. Panguva hatina dzechiKristu, uye zvakare, hatina 'kuita’ roora. Kunyange vamwe chikonzero hatina. Takapiwa akaroora anenge 28 1/2 makore ikozvino, vari vabereki 5 uye vanasekuru vaiva 2. Ndinoda hupenyu hwangu. Kwete kutaura kwaiva nguva muwanano yedu kuti mumwe wedu chete vaida kufamba kure uye muuye haana kudzoka, kwete kutaura kutsamwa zvaisava hwedu hwezuva nezuva kwechinguvana, kana kuti kufunga EW akaita tinokanganisa hwedu akanga asiri kufunga kwacho. Asi isu takaita. Uye kana kurambana hazviitwi, MWARI anounza kuporesa nguva.
Mwanasikana wangu akaroora pa 20 uye kwakange kusina umwe kurudziro iye nokusingaperi akamuka kubva kuvanhu. Haana kunzwisisa nei vanhu vanofunga chinhu chokupedzisira pachinzvimbo nenguva chikomborero. Kunyange pakati munharaunda yechiKristu.
mwanakomana wedu Ukuwo akaroorwa panguva Christmas nguva, pazera 27. Just akanga asina kuwana musikana zvakanaka. Chinhu chimwe.. zvakarurama mukomana / musikana ari kuenda e zvakarurama mukomana / musikana kunyange kuburikidza oma nguva. Just kuomerera The Cross.
CL • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
Ini ndisingagoni kubvumirana zvakawanda. Saka vanhu vakawanda vanofunga kuti kuroorana inotyisa uye hakuna kunyanya pasina chikonzero “kukasira-kasira” mariri, asi chinhu kuti Mwari anoda kushandisa kukomborera uye nesu kutsvenesa. Ndinokutendai pambiru!
>> Asi kana Ndakatarisa muMagwaro handina kuwana zvinhu zvakafanana, "Marriage akaenzana rufu! Kuitiza!"kana, "Isa muchato kubvisa kusvikira haugoni kuripfekenura machiri,"kana, "Asi kuroorwa kana uri ndachembera kunakidzwa noupenyu,"kana, "Kutamba munda kwechinguvana uye ipapo sarudza akanakisisa chete."
mai • Zvita 9, 2014 pa 1:48 ndiri • pindura
Ndinokutendai zvikuru kushanya Blog yangu – Ndinofunga mawana kunze inosimbisa adedrss kwamuri (I Hamubvumirwi nawo dzangu mhinduro). Uine mhuri unondifadza, zviya! Congrats pamusoro mhemberero yako!
Praisemovement • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
Tinotenda kuti pachena kwako uye kuti “kuita Jesu kutarisa zvakanaka”. Mad kuremekedza nzira iwe livin'and bringin’ kukudzwa Shoko.
Andrea Paige Jackson • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
Kuti uchapupu naka. Uye iwe Hamubvumirwi pamusoro vangu uye chegumi gore murume wangu! (Takaroorana OLD, Zvisinei.) : )
Jcsmsoul • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
ropafadzai a mwari mukoma! ndinoziva chaizvo nepfambi kureva kunyange ndawana kwapera ishe muupenyu uye Ndinoshuva akaroorwa nomurume aitya Mwari Ndiko akavimbika kumudzimai wake! dayz izvi nesimba raro chaizvo kuwana kuti! uye chimwe chikonzero Ndinovimba uye ndinonyengetera kuroorwa uye kuwana munhu nokuti nepfambi dont kunzwa mhaka kana achiita rudo kana Ur kuroorwa! mwari komborera U!
Jazmin • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
Ndinokutendai zvikuru kwete mumwe vachaona muchato sechikomborero. Chete vanovimba uye vatende muna Ishe wedu Jesu Kristu vachatitaka. Ini kuti kuroora pane muduku chaizvo uye panguva 28 makore ini nomurume wangu tine 3 vana yakanaka uye upenyu hwedu vakazvipira kuti rumbidza uye kunamata baba vedu vari kudenga. Marriage hakusi nyore kunyange, ine zviri nemateru nezvisingafadzi asi kuburikidza nenyasha uye tsitsi dzaMwari uye Nokupa kune zvaanoda munhu anogona kukura. Ndinokutendai zvikuru kuti nyaya yako zvinoshamisa chiri chikomborero chaicho. My Ishe mberi kurega iwe nemukadzi wako kukura ndinobvunza uchenjeri hwake uye vakawanda zvezvikomborero zvose zvizhinji nyasha dzenyu.
Tachy Musica • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
Ndakaroorana saka “diki” naizvo, uye ichi ndicho chikomborero, isu nguva dzose pamwe chete (kusanganisira mwanasikana wedu chokwadi), tine zvose, uye kubatsira mumwe, vamwe ppl vanofunga kuti kana iwe kuroorwa saka muduku ichava kwenguva pfupi nguva, asi ngaavongwe Mwari isu dzinenge 8 makore akaroora uye chinonyanya kukosha kuedza servin’ Mwari nguva dzose…zvikomborero
Agopylove09 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:05 ndiri • pindura
kuti rinotyisa zvakadaro!! wokwaEfremu 25 uye ive uchifunga chii zvose kunouya pamwe nokuva mukadzi akanaka uye zvechokwadi kuva pasi uye kuva mwari sezvo wako muzinda uye nguva dzose achitsvaka mazano ake nokuti zvose uye chete zvechokwadi nokurega Kristu kutungamirira uye kuvaka kuti ukama pamusoro hwakasimba pasi raKristu zvechokwadi jesus..falling murudo muponesi wedu wokutanga kunofanira!! kuva kuti hwepedyo naye alllows kukura uye kuziva rudo zvechokwadi uye MWARI anogovera kuti rudo nepfambi kupa wako.. saka greatful muponesi Ndiani nguva dzose anopa ..<3
Joe Stevens • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
Ndiri oldee uyo inobvumirana zvizere Triplee. Kunyange hazvo zviri kurohwa zvakasiyana (mazera) nokuti zvakasiyana vabereki. Uye munhu wose anofanira kuroora ari Mwari wavo-akagadzirirwa nguva. ndiri 50 yrs yekare, akaroora kuti mudiwa wangu pandaiva 23 uye iye akanga 20! ikozvino 27 makore uye 1 Papera mwedzi, pane kuramba (kugona) mafayawekisi pakati pedu, achiri madly parudo, shamwari dzepamwoyo uye vachifamba pamwe muchinangwa chaMwari. Kurasikirwa zera I akaroorwa 6 Papera mwedzi! Asi kunyange vana vangu vanofanira kuziva circumstacces dzavo havasi hazvo kufanana needu, kana muri timings naMwari uye urongwa kwavari zvakangofanana.
Femi shoroma • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
Ndiri oldee uyo inobvumirana zvizere Triplee. Kunyange hazvo zviri kurohwa zvakasiyana (mazera) nokuti zvakasiyana vabereki. Uye munhu wose akanga kuroora ari Mwari wavo-akagadzirirwa nguva. ndiri 50 yrs yekare, akaroora kuti mudiwa wangu pandaiva 23 uye iye akanga 20! ikozvino 27 makore uye 1 Papera mwedzi, pane kuramba (kugona) mafayawekisi pakati pedu, achiri madly parudo, shamwari dzepamwoyo uye vachifamba pamwe muchinangwa chaMwari. Kurasikirwa zera I akaroorwa 6 Papera mwedzi!
Reverandjeff • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
Ndinoziva uyu anonyatsoziva… Just vakapemberera gore redu rechi13 kuroorana, uye ndiri 35.. Ndakanga chete vabereki mibvunzo kwandiri saizvozvo, asi isu vaviri chete vaiziva Mwari akanga Wakazvitema uye akauita. We intersected hwavamwe panguva RINOKOSHA nguva apo isu dzakaguma ari mumwe vamwe Mbambo, ane nevakawanda Mbambo waKristu. The yakanakisisa ndechokuti patinowana mukana wokutaura vanhu vaduku vari kunetseka ukama / wanano uye isu tiwane kutaurira uchapupu hwedu siyana nezvimwe !!! Sezvo Chokwadi, akanga zvimwe muchikurukura izvi pamwe JPaul makore apfuura.. Small nyika !!! Mwari akapa vaya vanotsvaka zviri KODZERO ZVINOKOSHA hurongwa, uye tinokoshesa rumbabvu yedu pane runnin pashure chickenbones. :)
Jeff Young • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
Oh uye kuziva, isu tarisa pa http://www.facebook.com/reverandjeff #GotAGodlyDime
Bobshumaker • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
My Baba & Amai vaiva Sweethearts chikoro uye varoorana pashure chikoro (vose vaiva 18 zera). Vachiri ndaroorwa nhasi uye havasati kuratidza chero zvikunguro pamusoro hwavo pamwe chete. Kuva munhu mukuru anogona kutanga muchato – uye nemafungiro ako pamusoro zvauchasarudza anoratidza vabereki vangu. vanoroorana Godly vashoma uye kure pakati muzana rino remakore….Mwari akuropafadzei uye urambe uchifara kweinenge 50 kana 60 makore!
Monique Jolicia • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
Aripiko nyaya kwomudzimai?
Jeffreycotton7 • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:06 ndiri • pindura
Ndinokutendai wako mudzimai saka zvikuru kukurukura nyaya yako. ndiri 21 uye sokuti ndiri kuenda kuburikidza rinenge chete mamiriro ezvinhu. Ini hazvisi kuroorwa asi. Ndine kuti Mindset sei kumirira kana iwe nemumwe wako mune rudo, zvose zviri zvokunamata, zvakanaka, uye vakakwana kuburikidza nerimwe vamwe maziso. My musikana uye handina mubvunzo kuti tiri kuenda kuroora rimwe zuva. Asi kunyange zvazvo isu tose tinoda kuroorwa, iye kunotonyanya kutora nguva yake; tine dzose nguva munyika mhando munhu. Ndiri kutsvaka ASAP hatisi akavimbisa mangwana mhando munhu. Saka nei kumirira? Iye ndiye musikana akachenjera chaizvo. Iye ini nezvokuratidzwa mukadzi wako uye wake nyaya zvishoma. Kufunga kuti zvinhu kuti vawane nzira chikoro uye basa zvinangwa. Asi kuti zvakawanda kurutivi kungotaura vana varoorana. Ndinogara kumuudza kuti handidi kuti mwana wedu wokutanga pedyo 30 zera. Handidi muviri wangu kutanga simba nemhaka yezera, izvo zvaizoita kuti zviomere uye zvakawanda unonetesa kutamba famba nevana vangu. Ndinoda 7 vatowanda uye 3 panguva mudukusa. Saka zvayo zvakanaka kutanga pachine makore. Asi ini acharamba kuedza kuisiya mumaoko aMwari uye kwete kunetseka kunyanyisa.
aneetarh • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:07 ndiri • pindura
tenda a Trip zvikuru N Jess, N vose hu DT akaita taigara kurudziro munzira kana D Oda. zvino Handichagari kuvhunduswa gettn akaroora mangwanani kunyanya considern D chokwadi DT isu tose kuda Mwari. Mwari bls U…
Dash • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:07 ndiri • pindura
Jannon Fitzpatrick, Ndinobvumirana kuti Mwari rudo. Nzira bedzi rudo rwechokwadi ndiko kuona uyo akasika rudo. Pakati kuvanhu tinogona pave chinhu kuti caliber kana tiri kubvumira Mwari kutungamirira rudo hwedu uyewo. “Hakuna une rudo rukuru kune urwu, kuti ape upenyu hwake nokuda kweshamwari dzake” jhn 15:13. Rudo haasi kuwana self kugutsikana (KevinFerere), kana kuwana munhu anogona kugutsa uye ude nemagetsi nomunhu muuropi yako. Sezvineiwo, mufananidzo vako “KwaAdhamu” papeji rako rinobva Renaissance nguva yaiva apo dzematongerwe rudo uye kudanana dzikava chinhu nokuda nomumwe kuzvigutsa pasinei mutengo kuti mumwe munhu. Kuti kupenda pacharo vemanyepo achitaura kuti Adam ari kusvasvavirira kuna Mwari uye akatora chikamu zvaakasika. Ndyaringo ndeichi, Michelangelo pakuguma hwake akaona zvaakanga aita uye vapfidza, kuedza kusanganisa chiKristu uye Humanism (Man ari nechiyero zvose). dzematongerwe ichi rudo kupi ndinofunga uri kuuya kubva ? inova zvimwechete Vaiita muchiGiriki, Renaissance, uye tsika yanhasi. Pane zvechokwadi “hapana chitsva pasi pezuva”-Solomon, uyewo kubva muBhaibheri.
Paul Jones • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:07 ndiri • pindura
Hey rwendo akaroora kubva ndakanga 22 uye 28 ikozvino. chete akanga yedu 6th anv. mwari vanawo vanokukomborera 4 vechiduku. Ndinonamata kuti tirambe vanokukomborera uye mhuri yako.
Danz_17unlocked • Nyamavhuvhu 19, 2013 pa 7:07 ndiri • pindura
Izvi zvinodikanwa Trip, Dai Mwari kwazvo kukomborera nepfambi uye Ur mukadzi… uye dai vamwe b vakaropafadzwa ichi ^ _ ^ <3
CLL • Gumiguru 3, 2013 pa 12:15 pm • pindura
Chokwadi yakanaka uchapupu nokunaka kwaMwari uye chii Anogona kuita upenyu dziri zvachose vabvuma kwaAri. Ini nemurume wangu takaroorana mudiki (pa 24) uye vakaita iwe mukadzi, Mwari akaona zvakakodzera kuti isu kuunza pamwe kubwinya kwake. mwanakomana wedu akaroora muduku, pazera 20 yapfuura gore rino…femo :-) uye zvechokwadi awana chinhu chakanaka pakati mudzimai kwake Mwari. Taida hapana zvakawanda kwaari uye chikomborero.
Karenda • Gumiguru 3, 2013 pa 12:18 pm • pindura
Chokwadi nyaya huru! Ini nemurume wangu dzaroorwa vaduku, ndanga 22 uye murume wangu akanga 25. We chete inopembererwa 15 Makore kuroorana. Jesu, akatisvitsa pedyo pamwe chete nomudzimai mumakore, kutidzidzisa kuti “tife isu” kuti rudo nani uye kushumira mumwe. Udyire ndiye nhamba imwe muparadzi michato yakawanda.
Ndinokutendai nokuti chido chako kuti kukwira mberi uye akatendeseka pamusoro nyaya muchato sezvo kwazvinoita Rugwaro!
Michael • Gumiguru 3, 2013 pa 1:16 pm • pindura
Ini nomudzimai wangu vakaroorana 21 naizvo, uye kuti akanga 11 makore uye 6 vana kare (bio / toredzerwa / vokugara). Handina kuziva ndaiva “muduku” kuroora, Ndakangoziva iye ndiye ndaisada kurarama pasina! Mwari ave akanaka.
AJ • Gumiguru 3, 2013 pa 2:16 pm • pindura
Kuverenga pakati pemitsara: isu takada Jesu uye taiva horny.
Hwandinoona izvi zvichiitika nguva dzose pakati pevaKristu uye funga zvikonzero zvakadai izvi kuti kutamba akapoteredza chaiye zvakakukurudzira vari hilarious. It ungaora mutadzi chete zvepabonde, saka zviri kure kuchenjera kumhanyirira kwoupenyu hwose.
NACLARA • Gumiguru 3, 2013 pa 2:21 pm • pindura
The Mwari kuti yatanga kuti Marriage zvirokwazvo kukuona kuburikidza zvose. Uri kukurudzira vaduku vaKristu vechiduku uye vakaroorana Trip. Mwari vakukomborere!!
JOB • Gumiguru 3, 2013 pa 2:52 pm • pindura
Ndakaroorana pazera 21 uye mugore iroro sezvo imi rwendo Lee, mu 2009. Ndakasangana naye kuchechi pandaiva 16 makore isu tave pamwe kwerinenge 8 makore ikozvino. Takashanda Mwari pamwe chete AYCM shumiro, kusvasvavirira mumisha uye kugoverana shoko raMwari kuPhilippines. Takaudza mumwe nezuva “Ndinokudai nekuti ndinoona kuti unomuda Mwari”. Handisi nokusingaperi kudemba kukumbira kwake kwake ruoko muwanano. kare 4 makore muchato kwave chikomborero.
THATMAN • Gumiguru 3, 2013 pa 2:55 pm • pindura
https://twitter.com/KEVINFERERE <<< ndiyo ndiyo Guy IYI?? lol
Isaac • Gumiguru 3, 2013 pa 4:06 pm • pindura
Shoko raMwari zvechokwadi mukuru. Proverbs 18:22 zvakajeka anoperetera ichi kubva.
”Awana mukadzi awana chinhu chakanaka, Avigirwa nyasha Lord''.
utore wangu wose anoda kuroora kuti pakutanga kukumbira kutungamirira kwaMwari pakusarudza zvakanaka naye. Isu sevanhu shouldnt kusarudza kwedu uye forcifully kumbira Mwari kuti akomborere nayo. panzvimbo, isu ape mukuteerera zvachose, kutsvaka nyasha dzaMwari uye kukumbira kutungamirirwa kutevera zvaanorayira pamusoro hwedu.
SteveMcMillon • Gumiguru 3, 2013 pa 4:40 pm • pindura
Ndinoremekedza ichi zvikuru!! Its akakurudzirwa nekuti Ndarota chido kuwanikwa kubvira ndichiri 6 yrs akwegura uye alot vanhu vanoisa ini pasi nokuti. Munzira dzakawanda nayo akasika kutyira mandiri. Ndinokutendai zvakare nekuda ichi!
Terri • Gumiguru 3, 2013 pa 4:59 pm • pindura
A pfuurei 35 Makore apfuura Ndakaroora chikoro mudiwa wangu yakakwirira. Takanga vaviri 18, zvinenge 19. Taiva naysayers zhinji uye baba vangu kunyange aitarisira ndingadai kuwana vakarambana uye kuwana chiremba. Apo Mwari anoronga kuroorana hazvina basa chii makore vachati. zvikomborero zvakawanda!
Missy • Gumiguru 3, 2013 pa 6:01 pm • pindura
Ndakanga ndaroora vaduku (20 kuva chaiyo). zvino 32, Ndinonzwa sokuti unogona kuwanikwa chero akapiwa zera uye chero nguva ani… uye Mwari achashandisa munhu kuti anomuda chero ezvinhu vaswedere Pachake pedyo kuti munhu… zvose zvauinazvo kuti anoda kuva vatsvene saiye mutsvene. Ndokusaka Handitendi kune “one”… Chero vanhu vanosarudza kuroora, kuva “iye munhu” nokuti eachother :)
Missy • Gumiguru 3, 2013 pa 6:02 pm • pindura
asi chokwadi ichi ichokwadi chete kana vaviri vari vatendi
Johnny • Gumiguru 3, 2013 pa 10:27 pm • pindura
Ndotenda kwazvo. mudzimai wangu uye ndine zvakafanana nyaya. A shamwari Hamubvumirwi nhasi ichi uye zvakanga zvandaishayiwa. Rumbidzai Ishe wedu Jesu!
Lise • Gumiguru 3, 2013 pa 10:39 pm • pindura
Ndinokutendai nokuti nyaya ino! ndiri 36 makore Ndave ndakaroorwa kwemakore 19yrs…Hongu, ndanga 17 kana Ndakaroora murume wangu 18yr akwegura! Tine vana vatanhatu, rudo Jehovha uye vari kufara chaizvo :) tiri kubvunzwa mibvunzo yakafanana dzose nguva uye kunyange zvingasava yakakurumbira sarudzo kana chisarudzo nevakawanda, Ndiri kufara zvikuru uye waunovimba zuva nezuva kuti isu akaita chisarudzo kwatiri.
Steffan • Gumiguru 3, 2013 pa 11:18 pm • pindura
Izvi zvinoshamisa. Ndinoziva zvakawanda vanhu vanofunga ichi ndicho ndicho chikanganiso chikuru hwako. ndiri 22 uye chaizvoizvo vave kufunga ichi nemumwe ndinoziva uye vaida kubva sophomore yangu gore chesekondari. Ini ndiri zvinhu chokwadi havasi mushana uye miraraungu newe, kana ndiri kutarisira kuti ini. Ndinoisa nokuda vambosiya vose negativity uye kutarisa mufananidzo hombe uye chii iwe wakanzwa Mwari kukutungamirira. Kana pasina munhu anogara kufara kwamuri, zvirokwazvo ndiri.
Kim Hunter • Gumiguru 4, 2013 pa 8:30 ndiri • pindura
Ndakasangana murume wangu pa 14 takaroorana pandaiva 21 uye akanga 23 tave pamwechete 22 makore uye ndaroora 15 ivavo 22 hapana chakaipa kwayo chete sei munhu anotarisa upenyu wechidiki kuroorwa….nekuti zvechokwadi lifr yako chii iwe kuti….uye chokwadi ini nomurume wangu vanoponeswa uye kutenda mwari uye tiri kurarama upenyu hwedu nokuda naye mwari zvose zvinobvira kunyanya refu healthly rudo muchato hapana nyore asi mwari unogona kuita…….UKOMBORERWE!!
Taurai: Nei ini kuroora saka muduku? - Umambo Cakers Kingdom Cakers
Cherisse • Gumiguru 4, 2013 pa 9:43 ndiri • pindura
Chikomborero kuziva Jehovha uye kunzwisisa shoko rake. I dai vanhu vakawanda vakaita semi. Usarega Dhiyabhorosi mwoyo. Tinoziva kuti kwose kwose.
GrantYoung • Gumiguru 4, 2013 pa 12:44 pm • pindura
Ini nomudzimai wangu takaroorana pataiva 22 uye ndaiva chete chiitiko. Friends kuti vakaponeswa uye Kusaponeswa vaida mundiudze ndaiva upenyu zvakawanda kurarama. bhabha My ini akayeuchidza vose Clubbing uye kumapati ndaikwanisa kuita. My “pedyo” shamwari akatsanangura kuti paiva nezvimwe hove mugungwa kuti riongorore. tsime, chaizvoizvo takaroorana yakakomba nguva 3 vamwe vakaroorana zera redu akaita! Tiri vashoma asi zvisiri oga uye zvinokurudzira kuyeuka kuti.
Nenyasha dzaMwari isu chete inopembererwa 3 makore uye rave zvikuru! Ndinokutendai nokuti kugovana Trip!
maka • Gumiguru 4, 2013 pa 4:24 pm • pindura
zvinokubatai My yaizova kuti kana muri kuzoroorwa muduku, munoziva zviri nani zvakaipira kuita kudaro. Zvakaoma chaizvo kunyange zvakanakisisa ezvinhu. Kana usati wagadzirira kushanda yakaomesesa waita nokusingaperi aishanda uye zvachose zvibayiro uye kubata yakawanda mwoyo uye kutemesana musoro, regai kusaina yarwo. zvisinei, kana iwe unogona kutsungirira (uye vamwe vanhu vaite) kana kunogona dzimwe nguva.
Kevin • Gumiguru 4, 2013 pa 5:42 pm • pindura
Ndinoda nemaonero ichi mubhaibheri inobva. Ndicho kushoma pakati American Christian, apo tsika uye magariro Zvivako zviri saka Anti-muchato, kuona wechiduku, kunyange munhu wechikuru, akadaro yakakura mumudzimu maonero pamusoro kukosha tsika dzaMwari. Zvichienderana zvakawanda zvakataurwa Ndakaverenga, nemaonero ichi rinonzwika saka dzimwe vanhu, kunyange muKereke nokuti taona vakabvumira pachedu kuvimba akananga patsika dzemunharaunda zuva kupfuura chokwadi yemubhaibheri chii chinobatanidza Mwari kuti kukosheswa uye pfuma. Kukunyengetererai rwendo, chengeta kugoverana Vhangeri uye chokwadi cheshoko raMwari akaita hunoshandisika uye chaizvoizvo ari mutendi wacho upenyu.
PastorRob • Gumiguru 5, 2013 pa 6:55 ndiri • pindura
Ndinoda kuti muzive Trip- Lee ndakaroorana 2 mwedzi pashure Ndakatendeuka 21. Ndiye Mwari zvose mairi? Ainge zvose zvirimo pasinei vanhu pfungwa uye pfungwa dzavo pamusoro sei handifaniri kuroorwa kuti ndaifanira kumirira. Munhu waMwari Ndave ndakaroorwa kwemakore 16 makore zvino 2 Vasikana Beautiful uye ndiri kwazvo greatful kuna Mwari kuti Mwari akachenjera, kudzwa anokosha yakanakisisa. The runako pamusoro uchapupu wako aida kuti azvitaure!!!
Taurai: Single mu. Married… | Zvinoreva Upenyu
Mavis • Ndira 28, 2014 pa 10:10 ndiri • pindura
Ndine zano vose vechidiki. Kana uri 18 kana pamusoro, kutanga kutsvaka mumwe! Sex panze kana muchato achakuunzira chinhu asi marwadzo, leaness mweya uye utano zvakaipa, mupfungwa uye mumuviri. Kuroora munhu mufaro uye zvoupfumi booster! Unogona kuwana zvakawanda zvaitwa uye vanonakidzwa lufe zvakawanda kana hausi woga. Vabereki vako vangangodaro vakapindira vakarambana nokuti havana kutevera mwoyo yavo muuduku hwavo! Handina nzvimbo kuzvitsanangura zvose, asi iwe dzinovakwa kuti mated. Tanga kuita yor mazita inofanira kuva unhu pakarepo uye kuroora muduku muchine wose wako kupa. ndiri 53 uye grayeful chaizvo kuti vakaroorana. Ndakanga vakaroorana 31 -nguva uye mujenya kugumbuka vazhinji kana waparadzwa vechidiki-nzira nzira yapera. Tariro kuitwa kana muchava vakachenjera hwako uye kunakidzwa nayo nokuvapo mariri!
GOSPELMAGDOTCOM • Kukadzi 6, 2014 pa 8:33 ndiri • pindura
Tinoonga kuverenga nyaya yako.
Ungakwanisa tipei nemvumo kushandurira nyaya yako muchiFrench uye kubudisa navo website yedu: gospelmag.com?
Tinokutendai zvikuru pachine nokuda mhinduro yako.
Best muna Kristu,
tsitsi • Kukadzi 15, 2014 pa 3:14 pm • pindura
shamwari yangu Akatenga neni bhuku rino pataiva okuyaruka nezvekuva jaya, chiremerera mukadzi wechiKristu. Chokwadi tinokurudzirwa akamirira kusvikira varoorana uye zvose uye akaita ndima yose. It ataurwa uye vaienda naro pachake kuti Mwari haadi kuti tive dating. Ini mhiko pachangu kuti ndinoda chemuganhu vakomana (Ndinofunga ndaitosvika ndiri kuitwa zvakakwana yava kuita kunyara kwangu). Ndingadai kuponesa zvimwe zvinhu kuti muchato asi uye kure kare 2 Makore ndava yakawanikwa mwoyo. Ndakagara vasurukirwe. Ndainetseka kuti chii chakaipa neni uye kana ndine zvakanaka zvakakwana. Handisi. Handizivi bhaibheri ndima ose. Ndinoda kudzidza zvakawanda chaizvo. Ndanga kuedza uye handidi kuziva chero mukomana nekuti ndinogona kuva kugumbuka uye anogona nditungamirirei pasi nzira Mwari haadi ini pasi asi ini yokusurukirwa. Nguva dzose yakanaka kuona vamwe vechiduku vari murudo. Zviri kunyange NANI kana zvavari akaroora uye ndinoziva hazvina kunaka kuva godo asi vose inoti “o, richafa kuuya munguva KWAKO”. I nezvazvo dzose manjemanje. Ndakasangana ichi mukomana akanaka here. Tine unhu akafanana chaizvo asi akati haana kuenda kuchechi. Akati achitenda muna Mwari uye ndinoziva Handisi tizadzise ndoga asi handigoni kubatsira asi vanonetseka nekuti handifunge haana kushingaira kutsvaka Mwari kana ndiri kuenda kuzvidemba chinhu. Vakadzi vasina kufanira kuedza uye kushandura vanhu ndikanzwa. It kunoodza mwoyo anofungidzirwa. tsime, Ndiri vaneta yokumirira. Ndinofunga ndichaenda kudzidza nzira yakaoma. Handisi pabonde kunyange. ndiri 23 uye vachiri nesimba pamusoro kuti asi ndiri vavhiringidzika sei handina kuwana murume ikozvino. Wese anowana zvavanoda. Zviri kunetsa kuti handigoni kurega kufunga vakomana. Ndinomboora mwoyo saka dzimwe nguva. Kana ndichinge kuroorwa mukomana uyu uye haana achinja tichafuka unequally pajoko? Vamwe vanhu vane zvose. Uye Handisi mari. Ndiri kungoda mumwe anondikoshesa. Zviri zvakanyanya kutsanangura.
Natalie • Kurume 11, 2015 pa 1:21 pm • pindura
Uchiri chete 23! :) Usanetseka haana kuwana “rudyi” Poshi, hapana munhu mumwe chete kunze uko ari nezvechisarudzo akanaka. Uye chete kujekesa: Imi munokosha IT. Pane chikonzero chokuti iwe uri iwe uye panyika ino panguva ino. Uchikosha Jesu, chete kuverenga uye vanoti zvivimbiso zvake kana iwe ukatanga kufunga kuti uri kufanira. Rwandinonyanya kufarira: “Ndichaita kuzovasiya iwe kana kukurasa.”
Mumwe Ndaiziva achangobva vakazoguma vakarambana, uye nyaya huru muwanano yavo yakanga kuti aiva mutendi uye akanga asina. A Chisarudzo uchava kuti vachava “ndiye Mwari zviripo?” Ramba uchitsvaka Jehovha nomwoyo wako wose, Agoruramisa iwe. Achakutungamirira. Achapa kurudziro rwaunoda kana uchinetseka uye mwoyo. Chinhu dzandakaona kwazvo kuverenga Rugwaro zvinonzwika ndisati ndaenda kunorara, uye kunyanya kana ndinonzwa pasi uye vachirwiswa kubva muvengi. Hauzivi kuti Mwari ane chete vhuu.. kana chete iwe mira. Ndinoziva unonakidza zvokuti zvakaoma uye nokutendeseka, kunetsa, asi kana iwe acharamba achitsvaka Jehovha, Achagutsa iwe mumwaka ichi. Pane chikonzero muri mumwaka! Hauzivi kuti Mwari achashandisa nayo seuchapupu kubatsira vamwe vasikana vaduku vari kunetseka zvimwechete! :) Ndinovimba izvi zvakabatsira neimwe nzira! zvikomborero!
tshireletsopreciousntumo • Mbudzi 7, 2014 pa 2:43 ndiri • pindura
Izvi ndizvo zvandaida kunzwa, ndatenda uye MWARI ropafadzai
Micheala • Kurume 22, 2015 pa 8:32 ndiri • pindura
Ndakaroorana pa 21 uye rakanga rakanaka …
Haugoni kubatsira ani ukapfugama murudo kana kana ukapfugama kuda navo,
Handina kumbofunga ndingadai kuva mhando kuroorwa vaduku uye ndokurasikirwa “mafaro zvinhu” muupenyu .. asi handifungi Handina, Ini chete vakagoverana yangu “mafaro zvinhu” mumwe munhu wandinoda uye ndisingakwanisi kufungidzira mhenyu pasina.
Gisselle • Kurume 28, 2015 pa 7:41 ndiri • pindura
Hi ndiri Gisselle Ndiri kubva Honduras. ndiri 18 makore mukomana wangu 19. takasangana 15 ago muchechi yake New York! Ndinogara Honduras.. Naizvozvo yave kure ukama refu. Ndiri mugore rangu pakoreji rechipiri uye kuti iye. Takataura zvokuroorana. Uye dzimwe hama dzedu uye vakuru kuchechi yake anotitsigira uye vanotiudza ndicho chinhu chakanakisisa chokuita. Ndichiri kusachengeteka nezvazvo.. Amai vangu haisi zvokutadza rakashama pamusoro pangu kuroorwa saka vaduku saka uye sehanzvadzi yangu. Tave achinyengetera kubva patakatanga nezvokuroorwa sechingangova. Kana aigona ini ndinyore angu e ndingadai kutenda!
Jennifer • Chikunguru 8, 2015 pa 3:11 pm • pindura
Takaroorana 21 makore apfuura. ndanga 19 uye murume wangu akanga 21. Tava pedyo mumwe uye kuna Mwari. mbudzana nhatu Papera tiri kutarisira inotevera 20.
Charles • Nyamavhuvhu 9, 2015 pa 11:07 pm • pindura
Ini chete ndaida mazvita dzikarurama nenzira mberi kuti kuparidza Gods shoko. Ini chete akatarisa 'Fallin’ Vhidhiyo mumhanzi pashure pazuva mudungwe munzira miedzo uye kunzwa sokunge Mwari akataura chaimo zvandiri kuenda kuburikidza. The zvinoshamisa Chipo Grace kuti tinoudza haigoni kuyerwa kana kurerutsa. Ndinokutendai zvikuru kuzodzosera okutanga maziso angu kuti chinhu saka hwaro pakufamba kwangu naMwari. Neniwo kunyengeterera kuti Mwari achakukomborera muushumiri hwako.
Chidera • Nyamavhuvhu 18, 2015 pa 2:48 pm • pindura
Kamwe Mwari anoratidza iwe munhu uye munhu ane chete chido Mwari sezvo iwe uye makagadzirira kufamba nemi yose nzira. hazvina basa zera chii, kamwe nguva yasvika here kuroorwa. The chinhu chete kubvuma naye zvose nzira dzako, Iye uchaita makwara ako (Proverbs 3:6). Just vane chido uye kuda Mwari, panguva yakakodzera anogona kukupa mubatsiri wako unenge kumira newe kuburikidza zvose. Ko Wanna chikamu, Saka regai kuparadzana naMwari. In ZVOSE nzira dzenyu Umutende, he'ell kuti nzira yako yakarurama.
Stacy • Zvita 14, 2015 pa 3:57 pm • pindura
murume wangu 3/4 dema uye kota chena.(Ndiri chena). murume wangu ndaibatanidzwawo muduku akaroora neniwo 18 kuenda ku 19 uye murume wangu akanga 20. Vanhu vakatiudza kwete kuti, takanga kukanganisa uye ndichatuma nokurambana. Hatina kuteerera tikaroorana uye ikozvino tave 16 makore. Mwari ari kutonga.
jaysmith • Kurume 12, 2016 pa 7:34 pm • pindura
Kevin–iwe sokuti une zvinhu zvishoma pasi. Uye muri kushanda nzira wako. Ramba uchienda, mbudzana! Pakupedzisira, kuziva zvauri hafu uyewo ndiyo yakawanda vattle, pasinei zvikanganiso. zvikomborero!
TheRealHonestTruth • Kurume 27, 2016 pa 2:44 pm • pindura
Zvakanaka kuti vanhu ikoko kuti vakakomborerwa rombo Excellent kwazvo NO zvoutano zvachose uye vari akaroora ane mhuri ine mari yakawanda Zvechokwadi tine zvakawanda zvokuonga chaizvo sezvo zvechokwadi vanofanira NO chikonzero chokunyunyuta apo vazhinji vedu tiri NOT kuti rombo zvachose kunyange zvazvo vazhinji wanga kuroorwa muduku iyo pane zvakawanda iwe kuti uchiri pamwe chete nhasi.
Tye Smith • Chikumi 26, 2016 pa 9:55 pm • pindura
unyanzvi chaizvo akasvika elivate musasa neChishanu 24/6/2016
RachelSanchez • Mbudzi 2, 2016 pa 1:14 pm • pindura
Ini nemurume wangu takaroorana ambotaurwa gore rino. Ari 22, uye ini ndiri 21. Ndinomboora akabvunza dzose nguva nei ndaizo “kukanda uduku hwangu kure” kana sei kunyange ndingadai kufunga zvokuroorana kukoreji. Ini hazvishamisi unyatsobatsirwa anorwadza netsinhiro vakadzi vakwegura sokuti kutarisira pasi pangu. Zviri dzinosiririsa kuti vamwe havagoni kuziva kuti ndiri chaizvoizvo here kunakidzwa pauduku hwangu zvikuru kufarira munhu munyika. It chichirwadza apo vanhu (kunyange zvizvarwa vakwegura) vanofunga kuti zviri zvakakwana wakanaka vanhu avo 20s kurara kumativi, asi kana varoorana zviri kukonzera kunotyisa. Tichangobva tariro muchato wedu ichatikurudzira vamwe kutora achikwakuka apo vanonzwa vagadzirira, pasinei nenzanga anovaudza.
The Very Sad Chokwadi • Mbudzi 27, 2017 pa 8:09 ndiri • pindura
Kunewo vazhinji vedu varume zvakanaka chete vakanga chaizvo kutarisira kusangana mukadzi akanaka kugadzirisa pasi pamwe, asi zvinosuruvarisa kuchiri haana zvakaitika kwatiri. Uye varume nevakadzi vaiva chaizvo vakakomborerwa chaizvo kuti vaonana uye une mhuri iyo iwe here saka kwazvo kuti kuonga.
alvina.reborn • Ndira 3, 2018 pa 2:39 pm • pindura
Thanks alot Trip. Kwemakore Ndanga kukuudzai pachangu kuti ndinogona chete kuroorwa apfuura zera. Asi ikozvino ndinoziva nani.